MYUTSAWMYIT : စစ်ဗိုလ်ချုပ်များသတင်း: ဦးသန်းရွှေ အနိုင်နဲ့ပိုင်းသွားခဲ့တာလား???
အာဏာရှင်တွေ ပြည်သူလူထုကို ဖိနှိပ်လေသမျှ၊ အကြောက်တရားနဲ့ ဓါးမိုးအုပ်ချုပ်လေသမျှ တနေ့နေ့မှာ အာဏာရှင်ဆိုသူတွေဟာ သူတို့အပြစ်တွေအတွက် ဘ၀မကူးခင်ပဲ ပြန်လည်ပေးဆပ်ကြရတယ်။ အာဏာရှင်အများစုဟာ အသေထွက် ထွက်သွားကြရတာများတယ်။ အသတ်ခံရတာ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေသွားတာ။ အရှင်ထွက်ထွက်ရင်လည်း ပြည်ပြေးဘ၀နဲ့ စိတ်ဝေဒနာ ခံစားပြီး မထင်မရှားဘ၀နဲ့ သေဆုံးသွားကြတာ၊ ထောင်ထဲမှာ သေရတာ၊ အသုဘကိုတောင် လိုက်ပို့သူမရှိပဲ ညှိုးညှိုးငယ်ငယ်နဲ့ သေသွားကြရတာ စသည်ဖြင့် ကံဆိုးကြရှာတယ်။ အာဏာရှင်တွေကျဆုံးတဲ့အခါ အာဏာရှင်တွေရဲ့မိသားစုတွေ၊ ပတ်သက်ရာ ပတ်သက်ကြောင်းတွေဟာလည်း လိုက်ပါကျဆုံးသွားကြ ရတာချည်းပဲ။
ဆိုတော့ ဦးသန်းရွှေနဲ့ သူ့မိသားစုကရော ဘယ်လိုအဆုံးသတ်မှာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းက ရှိလာတယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး စင်မြင့်ထက်ကနေ အောင်မြင်စွာ ဆုတ်ခွာသွားတဲ့ ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံ ဗိုလ်ချုပ်မူးကြီးသန်းရွှေဟာ ဒီမိုကရေစီလိုလားသူ အတိုက်အခံတွေကို နိုင်ငံရေးကြိုးဝိုင်းထဲမှာ အလဲထိုးပြီး အနိုင်နဲ့ ပိုင်းသွားခဲ့တာလား???
ဒါမှမဟုတ် သူဟာစိုးတထိတ်ထိတ်နဲ့ ဘ၀ရဲ့ နေ၀င်ချိန်တွေကို ဖြတ်သန်းနေရသူ တစ်ယောက်လား??? တိုင်းပြည်တခုလုံးကို လုပ်ချင်သလို လုပ်ခဲ့တဲ့ ဦးသန်းရွှေဟာ ဒီနေ့မှာတော့ အနိုင်နဲ့ပိုင်းပြီး ကစားပွဲအားလုံးကို တခန်းရပ် ပြည်ဖုံးကားချလိုက်ချင်တာ သူ့ဆန္ဒပါ။ တကယ့်လက်တွေ့မှာ သူ့ဆန္ဒတွေ အကောင်အထည်ပေါ်လာပါ့မလား??? သူသေသွားပြီးတဲ့အခါ သူဖြစ်စေချင်သလို သူ့မိသားစုဟာ လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ ဆက်ရှိနေပါ့မလား???
မဖြစ်နိုင်ဘူး။ တကယ့်လက်တွေ့မှာ ဦးသန်းရွှေ အိပ်မက်တွေ အကောင်အထည် ပေါ်မလာဖို့များတယ်။ သူ့ကျမှတော့ ကွက်ပြီး ကံကောင်းမယ်မထင်ဘူး။ Anyway history will tell about it.
ဦးသန်းရွှေဟာ ၁၉၈၈ မှာ စစ်တပ်မှာ ဒုတိယ ဦးစီးချုပ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ် ပါခဲ့တာမှန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးနေ၀င်းခိုင်းလို့ အာဏာသိမ်းခဲ့ရတာသာ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းမက်တဲ့ အာဏာဟာ ရပြီးရင် လက်မလွှတ်ချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတိုင်း ဦးသန်းရွှေဟာ အာဏာကို အကြိုက်တွေ့သွားခဲ့တယ်။ ဦးသန်းရွှေကြိုက်တယ်ဆိုတာထက် သူ့မိန်းမနဲ့ သူ့သမီးတွေ ကြိုက်တာကပိုတယ်လို့ ပြောရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ အာဏာကို အသုံးချပြီး သူတို့မိသားစု ကြွယ်ဝချမ်းသာဖို့အတွက် ဖန်တီးတယ်။ ကြွယ်ဝလာပြန်တော့ ကြွယ်ဝမှုကို ကာကွယ်ဖို့ အစီအမံတွေ လုပ်ရပြန်တယ်။
ဦးသန်းရွှေဟာ သူ့မိသားစုလုံခြုံရေးနဲ့ သူတို့ဥစ္စာဓနတွေအတွက် စိတ်ချသွားချင်တယ်။ အသေဖြောင့်ချင်တယ်။ နှစ်တွေ ကြာသွားရင်တော့ လူတွေမေ့သွားမှာပေါ့၊ မြန်မာတွေဟာ ခွင့်လွှတ်တတ်ပါတယ်လို့ ဦးသန်းရွှေတွက်ထားတယ်။
ဦးသန်းရွှေ စစ်တပ်ထဲ ၀င်တုန်းက ဘာပစ္စည်းတွေ ပါလာခဲ့သလဲ??? အခု ဦးသန်းရွှေမိသားစု ဘယ်လောက် ချမ်းသာနေကြပြီလဲ??? ဦးသန်းရွှေသားသမီးတွေထဲမှာ အဆင်းရဲဆုံးလို့ပြောတဲ့ ကိုထွန်းနိုင်ရွှေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုကတောင် ထာဝရ ဖြုန်းတီးလို့မကုန်နိုင်လောက်အောင် မနည်းမနောရှိနေတယ်။ မောင်နှမတွေထဲမှာ ဆင်းရဲလှချေရဲ့လို့ အပြာခံရတဲ့ ကိုထွန်းနိုင်ရွှေဟာ တစ်ဒါဇင်ထက်ပိုများတဲ့ အိမ်ကြီးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ ပြီးတော့ ဂျေဒိုးနပ် (J Donuts) ဆိုင်တွေ၊ မိုင်မေးက် (My Milk)၊ စားသောက်ဆိုင်များနဲ့အခြားသော သွင်းကုန်ပို့ကုန် ကန်ထရိုက်တွေ။
ဒါ့အပြင် ဒင်ဆမ် (Dim Sum) ဆိုင်တွေ၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှ သွင်းကုန်ပစ္စည်းများ (Queen Orange Juice Concentrates)၊ နိုက်ကလပ်များ(Dream JellyJ-J Night Club)၊ ထိုင်းစားသောက်ဆိုင်တို့ အပြင် အခြားသောလုပ်ငန်းပေါင်းမြောက်မြားစွာ။ အဲဒါတွေတင်မကသေးပဲ တရုတ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့ မှာလည်း သူပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ရှိတယ်လို့သိရှိရတယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံက J & J company ကိုလည်း သူပိုင်တယ်။
သားသမီးတွေထဲမှာ အဆင်းရဲဆုံးသားတောင် အဲဒီလောက် ချမ်းသာနေရင် လောဘကြီးလွန်းတဲ့ သူ့သမီးတွေ ဆိုရင်တော့ ဘီလီယံနာတွေဆိုတာ အသေအချာပဲ။ သူ့မြေး နေရွှေသွေးအောင်ဆိုတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်မှာတောင် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ ရှိနေတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဦးသန်းရွှေတို့မိသားစုဟာ အချမ်းသာဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်။
ဦးသန်းရွှေက ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ရန်သူမျိုးငါးပါးရန်က ကင်းဝေးစေချင်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားတွေထဲမှာ ခွင့်လွှတ်နိုင်သူတွေ ရှိသလို၊ ဦးဝင်းတင်လို သဘောထား တင်းမာသူတွေလည်း ရှိတယ်။ ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးသမားက ပြည်သူ့ဆန္ဒကို ကျော်လွန်နိုင်တာမဟုတ်သလို၊ ဥပဒေဆိုတာလည်း တကယ်အသက်ဝင်လာတဲ့အခါ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀-၃၀ က လုပ်ထားတာတွေမို့ ခုမဆိုင်တော့ပါဘူး လုပ်လို့ မရဘူး။ မတရားမှုဟာ ဘယ်တုန်းကလုပ်ထားထား မတရားမှုပဲ ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ ခရိုနီတွေ ဘယ်ဘ၀ကလာပြီး ဘယ်လိုချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတာ မှတ်တမ်းတွေ ရှိနေတယ်။
နောက်တခုက မြန်မာစစ်တပ်က ဦးသန်းရွှေမျိုးဆက် အဆက်ဆက်ကို လိုက်ပြီးကာကွယ်ပေးမှာလား??? ဖိုးလပြည့်တို့ ခေတ်အထိ ကာကွယ်မှာလား??? ဦးသန်းရွှေကတော့ ခေတ်တောင်မပြောင်းသေးဘူး သူ့ဆရာရင်း အဖေကြီး ဦးနေ၀င်းကို သစ္စာဖောက်ခဲ့တယ်။ ဦးသန်းရွှေကောင်းမှုကြောင့် ဦးနေ၀င်းခမျာ သေတာတောင် အသုဘပို့သူမရှိပဲ ညှိုးငယ်စွာ သေခဲ့ရတယ်။
အခု ဦးသန်းရွှေ ကျန်းမာရေး မကောင်းတော့ဘူး။ လမ်းတောင်ကောင်းကောင်း မလျှောက်နိုင်တော့တာ ၂၀၀၇ လောက်တည်းက။ ကျနော်ထင်တာတော့ ဦးသန်းရွှေဟာ သူ့အိမ်မှာ ဆေးရုံအငယ်စားတစ်ခု တည်ဆောက်ထားပုံရတယ်။ ဦးသန်းရွှေနဲ့ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်တို့ ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ ဆေးရုံဆိုင်ရာ လက်နက်ကိရိယာအားလုံးကို အဲဒီဆေးရုံမှာ နိုင်ငံခြားကနေ၀ယ်ယူ တပ်ဆင်ထားပုံရတယ်။ အဲဒီဆေးရုံမှာ အနောက်တိုင်း ဆရာဝန် (အနည်းဆုံး) တစ်ယောက်ကို အချိန်ပြည့် ခန့်ထားပုံရတယ်။
အဲဒီဆရာဝန်နဲ့ စစ်တပ်က လက်ရွေးစင်ဆရာဝန်တွေဟာ ဦးသန်းရွှေကျန်းမာရေးကို နေ့စဉ်အနီးကပ် စောင့်ကြည့်ပေးနေပုံရတယ်။ မနက်တိုင်း ညတိုင်း သွေးပေါင်တိုင်းတာကအစ၊ ဆီးဝမ်း စစ်ဆေးတာကအစ၊ ဦးသန်းရွှေစားမဲ့ အစားအစာကအစ ဘာတွေပဲစားရမယ်ဆိုတာ အနီးကပ် အကြံပေး ညွှန်ပြနေတယ်လို့ ကျနော်သုံးသပ်တယ်။ မဟုတ်ရင် ဦးသန်းရွှေကျန်းမာရေး အခြေအနေနဲ့ အာဏာရှင်ကြီးဟာ ဒီလောက် အသက်ရှည်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။
ဆိုတော့ ဦးသန်းရွှေဟာ လူမမာတစ်ယောက်အနေနဲ့ နောက်ဆုံးနေ့တွေကို ဖြတ်သန်းနေရပြီဖြစ်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်းမှာ ဦးသန်းရွှေဟာ အတိုက်အခံတွေကို အလဲထိုးခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကံကြမ္မာဆိုတာ ကြွေတစ်လှည့်ကြက်တစ်ခုန်ပါပဲ။ အတုန့်အလှည့်ဆိုတာ တကယ်ရှိတယ်။
ကျနော် သူ့ကို မေးခွန်းတစ်ချို့မေးချင်တယ်။ ခင်ဗျားတကယ်ပဲ အနိုင်နဲ့ ပိုင်းသွားနိုင်တယ်လို့ ထင်လိုက်ပြီလာ ဦးသန်းရွှေ??? ခင်ဗျားမိသားစုကို စိတ်ချလက်ချ တကယ်ပဲ ထားသွားတော့မှာလား ??? ခင်ဗျားမိသားစု ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို တနေ့မှာ မြန်မာပြည်သူတွေက ပြန်မသိမ်းနိုင်ဘူးလို့ ယုံကြည်လိုက်ပြီလား????
ပြီးတော့ မြန်မာပြည်သူတွေကကော ဦးသန်းရွှေနဲ့ အပေါင်းပါတွေကို တကယ်ခွင့်လွှတ်နိုင်ကြမှာလား????
အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာ သဘောထားကြီးကြီးထားပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တရားဥပဒေနဲ့ အညီဖြစ်ရမှာပေါ့ဗျာ။
(ဦးသန်းရွှေ၊ သူ့နောက်လိုက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ ဦးနေ၀င်းမိသားစု၊ ပြီးတော့ ခရိနီတွေရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ဘယ်နေရာကိုပဲထိုးထိုး လက်ညှိုးထိုးမလွဲတဲ့ စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေနဲ့ နိုင်ငံခြားမှာ ထားထားတဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆိုတာ ခိုးယူထားတာတွေချည်းပဲ။ ဒီပစ္စည်းတွေကို မြန်မာပြည်သူတွေပိုင်တယ်)။
မှတ်ချက် - ပုံတွေလိုက်ရှာပြီး ဦးသန်းရွှေရဲ့ ပုံတွေထဲက အလှဆုံး အခန့်ငြားဆုံးပုံကို တင်လိုက်တာပါ။